पशुपतिमा जलहरी : काठको काम गर्नेलाई सुन पिट्ने ठेक्का, सुन लुकाउन रातभरि काम « AayoMail
पशुपतिमा जलहरी : काठको काम गर्नेलाई सुन पिट्ने ठेक्का, सुन लुकाउन रातभरि काम
2021,11 September, 8:59 am
२०७७ सालको माघ १२ गते सोमबारको दिन पत्नीसहित पशुपतिमा पुजा गर्न गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्नका लागि राज्यकोषबाट ३० करोड दिने घोषणा गरे। अचानक ‘विशेष’ पुजा गर्न त्यहाँ पुगेका ओलीको त्यो घोषणापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल सुनको जलहरी राख्न निकै सक्रिय भए।
कोषले त्यसका लागि करिब १ अर्बको बजेट अनुमान गर्‌यो। यो जलारीका लागि सुरूमा करिब १०४ किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर पछि कोषले १०८ किलो सुन राष्ट्र बैंकबाट किन्यो।
पहेंलो धातुमा कालो मन, काठको काम गर्नेलाई सुन पिट्ने ठेक्का
प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सहयोग घोषणा र जलहरी राख्न निर्देशन दिएपछि पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचित ढकालले पशुपतिका लागि लगाइने त्यो सुनमा ‘पैसा’ मात्रै देखे।
आयोमेलको एउटा अनुसन्धानमा उनले सुनसम्बन्धी कार्यअनुभव नै नभएको एउटा काठको काम गर्ने कम्पनीलाई सुन पिट्ने ठेक्का दिएको फेला परेको छ।
ढकालले खोजी-खोजी कुनै बेलाका आफ्नै मित्रको एक काष्ठकला उद्योग ‘न्यू मित्र उड कार्भिङ एण्ड फर्निचर’लाई करिब १ अर्बको सुनको पिट्ने जिम्मा दिए।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया वा प्रतिस्पर्धा नगरी निवर्तमान सदस्यसचिवले न्यू मित्र उड कार्भिङ एण्ड फर्निचरलाई सिधै ठेक्का दिएका थिए।
यो काष्ठकला उद्योगका मालिक उपेन्द्र बराही र सदस्यसचिव ढकाल कक्षा ११-१२ सँग–सँगै पाटनमा पढेका हुन्। केही समय ढकाल पढाइका बेला बराहीसँगै बसेका पनि थिए।
तर बराहीले कहिल्यै पनि सुनको काम गरेका थिएनन्। आयोमेलको एउटा जिज्ञासामा उनले भने– ‘यो मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको हुँ।’
‘तपाईंले पहिला पनि सुनको काम गर्नुहुन्थ्यो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘अहिले बोल्ने अवस्थामा छैन। यसबारे कुरा गर्दिनँ।’ त्यसपछि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन र यो समाचार पार्दासम्म पनि उनको मोबाइल अफ थियो।
१ सय ८ केजी सुनमा ९७ किलो मात्रै
कोषले पशुपतिमा १ सय ८ किलो सुन राख्ने निर्णय गरेर उक्त कार्य बढाएको देखिन्छ। यद्यपि, अहिले भने त्यहाँ ९७ किलो सुन मात्रै राखिएको खुलासा भएको छ।
स्रोतका अनुसार पशुपतिमा जहलरी राख्न १ सय ८ केजी सुन राख्ने निर्णय भएपनि ९७ केजी सुनको मात्रै जलहरी पशुपतिमा राखिएको छ।
तर, जलहरी राख्दाराख्दै अदालतको आदेश आएकाले केही काम रोकिनुपरेको सदस्यसचिव ढकालले प्रतिक्रिया दिदैँ आएका थिए। २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी सुनको जलहरी बनाउने निर्णय त भयो तर कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम मात्रै भएको मुचुल्का उठाइएको छ।
पशुपतिलाई उज्यालो पार्ने बहानामा ५ करोड घोटाला, योगेश भट्टराई-प्रदीप ढकालदेखि मिलन थापासम्मको संलग्नता
कसरी गायब पारियो ११ केजी सुन
जलहरी लगाउने काममा सहभागी भएका एकजना प्रतिनिधिका अनुसार सुनको जलहरी लगाउने काम रातभरि चलेको थियो। र, त्यसमा तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र अहिलेका सदस्य सचिव तथा त्यो बेलाका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापालगायत केही सिमित पदाधिकारी, सदस्यहरूलाई मात्रै त्यहाँ बस्न अनुमति थियो। त्यसैबेला रातारात बाँकी सुन गायब पारिएको हुनसक्ने पनि उनले बताए।
कोषका एकजना कर्मचारीले जलहरी बनाउनका लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद गरेको थियो। कोषले २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाएको पनि उनले दाबी गरे। त्यसमा पनि कोषले ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राख्न लगाएको छ।
२२ क्यारेटको १ सय ८ केजी सुनको जलहरी तयार पारियो तर कोषको रेकर्डमा भने जलारी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम मात्रै भएको मुचुल्का उठाइएको छ।
बाँकी सुन कहाँ छ भने प्रश्नमा स्रोतले ‘त्यो कुरा प्रदीप सरलाई नै जानकारी होला’ भन्ने जवाफ फर्काए। स्रोतका अनुसार मिसावटकै समय बाँकी सुन तलमाथि पारिएको हो।
‘म आफैँ सहभागी थिए। मिसावट नै अप्राकृतिक रुपमा गरिएको थियो, त्यो कुरा तपाईं सम्भवतः सिसिटिभीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ’ स्रोतले भन्यो ‘हामी त फर्म्यालिटीमात्रै पूरा गर्न त्यहाँ गएका थियौं। बाँकी त ढकाल र थापा (अहिलेका सदस्य सचिव) सरकै मान्छे थिए।’
उनका अनुसार त्यो बेला जलारीका लागि सुन दान गर्न इच्छुकहरू पनि धेरै नै थिए। अफ्रिकाका एकजना सुनखानीका मालिकले त ५० किलो सुन एक्लैले दिनेसमेत बाचा गरेका थिए। तर पनि ढकालले लिन मानेनन्।
‘त्यो त कमिसनकै लागि नै होला नि!’ स्रोतले भन्यो, ‘नत्र एकसे एक दाताहरू आइरहेका बेला राज्य कोषको यत्रो रकम सक्नुपर्ने थिएन।’
योमात्रै होइन यसअघि दाता तथा भक्तहरूले चढाएको पशुपतिको कैयौं सुन नै गायब पारिएको छ। जसको कुनै हिसाब-किताब नै छैन।
विवादका बीच राखिएको थियो सुनको जलहरी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि कोषले २०७६ माघ २६ गते पहिलो पटक पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने औपचारिक निर्णय गरेको देखिन्छ। उक्त समय कोषले पशुपति नाथको गर्भगृहमा पुजिने शिवलिंगमा सहित अन्य स्थानमा जलहरी राख्न करिब १ सय ४१ किलो सुन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।
त्यसका लागि तत्कालीन कोषका कोषाध्यक्षमा तथा अहिलेका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय जलहरी निर्माण व्यवस्था समिति गठन गरिएको थियो। यसमा मूलभट्टसहित अरू चार भट्टलाई सल्लाहकार राखिएको थियो। जलहरी निर्माणका लागि भक्तजन र दातालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वानसमेत गरिएको थियो।
सुनको जलहरी राख्ने योजना पहिलादेखि नै बनेको थियो। उक्त समय सुन जनताबाट मागेर राख्ने कुरा भएपनि कहिकतैबाट सुन प्राप्त नभएको कोषले जनाएको थियो। जलहरी सुनको राख्ने कि तामाको भन्ने विषयमा पछिसम्म पनि विवाद थियो।
पशुपतिनाथमा जलहरी नराख्न सर्वोच्चको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश
उक्त समय नै सुनको जलहरी राख्न करिब १ अर्ब लाग्ने कोषको अनुमान थियो तर यति ठूलो रकम कोष एक्लैले खर्च गरेपछि कर्मचारीको तलब खुवाउने समेत पैसा बाँकी नहुने देखिएपछि डा. थापाले नै त्यो बेला जलहरी राख्ने योजना रोकेका थिए।
लामो विवादका कारण रोकिएको जलहरी लगाउनका लागि २०७७ माघ १२ गते पशुपति पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सहयोग घोषणापछि फेरि अघि बढ्यो।
लगत्तै तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र थापा मिलेर जलहरी राख्ने कामलाई अघि बढाए।
जलहरीबारे बाहिर नबोल्न कर्मचारीलाई पदाधिकारीको निर्देशन
कोषमा भ्रष्ट्राचार अनियमितताका अनेकन विवादमा फसेका डा. प्रदीप ढकालको पदावधि सकिएसँग अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो बेलाका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे।
नियुक्तिलगत्तै थापाले कोषको बैठक डाकेर जलहरीलगायत पशुपतिका कुनै पनि विषयबारे बाहिर नबोल्न कोषका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘सदस्य सचिवज्यूले कसैलाई पनि नबोल्न भन्नुभएको छ’ एकजना कर्मचारीले भने ‘त्यस्ता विषयमा त उहाँहरू नै बोल्नुहुन्छ होला।’
उनका अनुसार पशुपतिका कुनै पनि विवादका विषयमा बाहिर बोलेको थाहा भए कारबाही हुने धम्कीसमेत डा.थापाले दिएका छन्।
अहिले कोषको परिसरमा प्रवेश गर्दासमेत कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्डहरूले निकै सोधीखोजी गर्छन्। सर्वसाधारणलाई लगभग कोषको परिसरमै जान निषेध गरिएको छ।
अख्तियारलाई छल्ने प्रयास
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको शंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्ने सुर–सार गरेपछि कोषका पदाधिकारीबीच तरंग आएको थियो।
अख्तियारले अनियमितताबारे उजुरी आएपछि सुन खरीद गरेका सबै सक्कली बिल, भर्पाइ तथा अरू कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो।
तर कोषले कागजपत्र बुझाएको छैन। अख्तियार यसबारेमा थापा र ढकालसहित केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको समेत बयान लिइसकेको छ।
‘राजाहरूले पनि सुन चढाउँथे, ओलीले ३० करोड दिँदा किन विरोध?’
जलहरी राख्ने विषय अदालतसम्म
बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवंम संस्कृतिविद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राख्ने काम रोक्न माग गर्दै ११ फाल्गुन २०७७ गते सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता गराएका थिए।
वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए।
त्यस्तै अधिवक्ता ढुंगानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृतिमन्त्री ढकाल, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी थिइन। निवेदकले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार जलहरी राख्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, आर्थिक कारणलेसमेत निर्णय औचित्यहीन भएको, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकाले राज्यले धार्मिकस्थलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।
२८ फाल्गुन २०७७ शिवरात्रीका दिन जलहरी उद्घाटन गर्ने दिन तय भएको थियो त्यही दिन नै सर्वोच्च अदालतले जलहरी राख्ने काम रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यद्यपि, तयारी पूरा भइसकेको भन्दै कोषले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जलहरी उद्घाटन गरायो।
पशुपतिमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै थिएँ, पशुपतिले नै मलाई रुचाएनन्- अरगरिया
के हो जलहरी?
नेपाली संस्कारमा सुनलाई पवित्रताको नमुना मानिन्छ। नेपाली समाजमा सुनपानीले ‘चोख्याउने’ चलन पनि छ। तर शास्त्रअनुसार भगवान शिवलाई मनपर्ने भनेको तामा नै हो। २०५५ सालअघि पशुपतिनाथमा तामाको जलारी थियो। त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएको हो।
अहिले चाँदीको जलहरीको सट्टा सुनको जलहरी राख्दा भक्तजनहरू पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी दर्शन गर्नकै लागि आउनेछन् भन्ने व्याख्या कोषले गरेको थियो।
शिवलिङ्गमा रुद्राभिषेक पाठ गर्दा जलहरीमा पानी राखेर सानो मुखबाट जलअभिषेक गर्दा जलहरीको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। पशुपतिनाथमा हरेक दिन बिहान व्राह्मणहरूले रुद्राभिषेक पाठ गर्दा जलहरीबाट शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्ने गर्छन्।
पशुपति कोषका ‘हाकिम’ हरूले गोठाटारका थुम्कामा देखेको अर्बौं पैसा
भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा पशुपति कोषको ‘एलिट मेनु’